Harag Sagaaro Iiga Kac Mooyee Iiga Durug ma Leh – Rasaasa News
Nov 8, 2011 Harag Sagaaro Iiga Kac Mooyee Iiga Durug ma Leh
Damaaciga iyo danaysigu waxay ka mid yihiin astaamaha dulmiga ah ee Aadanaha ku abuuran ee ayna inta badan waxa afkiisu sheego iyo waxa adimadiisu sameeyaan ayna u wada socon, waxaan jirin dhago laab u duleela oo adkeeya xidhiidhka afka iyo adimada. Saaka kalgacal bari sun iyo waabay!
Shalay Saaxiib saaka col, sokeeyow sahwinaye say wax u jiraan. Sanad iyo wax ayaa laga joogaa kolkii uu dhacay heshiiskii nabadeed ee u dhaxeeyey dawlada Ethiopia iyo labo ka mid ah ururadii hore dawlada dagaalka ugula jiri jiray.
Labada urur ee heshiiska qaatay ayaa kala ahaa ururka Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya [JWXO] iyo midowga Janhada Xoraynta Somali Galbeed [MJXSG]. JWXO, waxay ahayd labo garab mid ka mid ah ayaana qaatay heshiis nabadeed.
Jwxo, waxaa la aas aasay 1984, waxayna dhaqdhaqaaq muuqda samaysay sanadkii 1991. Sanadkii 1993, waxay ku guulaysatay doorashooyinkii guud ee ka dhacay degaanka Somalida Ethiopia. Khilaaf ka dhex dhacay dawlada iyo ururka ayaa sababay in Jwxo, ay ku dhawaaqdo dagaal sanadkii 1994.
2004, khilaaf qarsoon oo u dhaxeeya masuuliyiintii ururka ayaa soo if baxay, kaas oo wax xal ah loo waayey, akhiritaankiina keenay in uu ururku u kala jabo labo garab July sanadkii 2007.
Sanadkii 2009, hogaamiyihii garab ka mid garabyadii Jwxo ayaa waxaa dagaal ku dilay garabkii ka go,ay Jwxo, xili uu ku jiray gudaha dalka. Dr. M S Dolala waxaa uu ahaa xubinkii ugu muhiimsanaa Jabhadihii ka dagaalamayey gabalka Ogaden.
Dilka xubinkaas ayaa keentay in uu burbur ku soo deg dego jiritaankii Jwxo, kaas oo xal beelay kolkii uu lugta la galay arimo beeleed.
MJXSG, oo iyadu ku cusbayd dagaalada lagagga horjeeday dawlada Ethiopia, ayuu khilaaf aan ujeedo lahayn ku dhexmaray gudaha dhulka Somalida Ogadeniya mid ka mid ahayd garabyadii Jwxo, oo uu hogaaminayey Jenaral Maxamed Cumar Cismaan oo ah ninka sababay burburka jabhadaha.
Dhimashadii siyaasi Dr. M S Dolal, masuuliyiinta Somali galbeed oo ay wadiifo u dhaxaysay garabka Jwxo ee uu hogaamiyey Dr. Dolal, waxay daraasad ku sameeyeen isbadalada duruufaha ka jira geeska Afrika iyo mida shacabka Somalida Ogadeeniya. Waxayna bishii March 2010, aqabaleen in loo kala dab qaado ururkooda iyo waliba garabkii Jwxo, ee uu saaxiibkood ka baxay oo uu hogaaminayo Salaxdiin Macaane in ay nabad la galaan Ethiopia.
April 2010, ayaa hogaamiyahihii MJXSG, waxaa uu ideecada ka sheegay in uu dhexmaray wadahadal nabadeed Jabhadooda iyo dawlada Ethiopia.
Dadweynaha u dhashay degaanka Somalida Ethiopia oo mudo 16 sano si gaar ah ay ciidamada dawladu dagaal ugula jireen, si aan kala sooc lahayn ayaa kolkay ideecada ka maqleen wadahadal nabadeed heshiis la,aan dalka ku huleelay.
Ethiopia oo laftigeedu u caal wayday dagaalkii ay Jabhaduhu wadeen wax kasta oo ay samaysay, ayey neef ka soo booday, meel walbana ku faafisay wadahadalka nabadeed.
Arinka ayuu xaalkiisu ahaa “Xamarna saari kuma dhimana, Abeesana Sugid kuma laabna.”
Runtii ururka MJXSG, waxaa uu ahaa curdin aan shacbiyad badan haysan, laakiin hogaamiyaha ururku curdan ma ahayn ee waxa uu ahaa rug cadaa waayo arag ah. Isku duubnida ururka ayaa waxay keentay in uu ka xoog weynaado Jwxo, oo dagaal waday 20, sano.
Labada Jabhadoodba, waxay heshiis kala dambeeya la saxiixdeen dawlada wadaaga Ethiopia September iyo October 2010.
Heshiiska labda Jabhadood waxaa uu ahaa isku mid aan waxba u dhaxaynin. Waxaana ugu muhiimsanaa in ay nabad helaan xubnihii ururku, kana shaqayn karaan dalka, in maxaabiista ka xidhan la siidaayo iyo in la shaqaaleeyo ciidamadii Jabhadaha.
Kolka uu heshiisku dhaco ma jiri doono magaca ay ururadu wataan, hadii ayna isu diiwaan galin urur mucaarad siyaasadeed oo nabadeed.
Ogaantana labada Jabhadood midkoodna isuma diiwaan galin in uu noqdo mucaarada ka qayb gala siyaasada dalka Ethiopia. Waxayna labadooduba aqbaleen in ay ahaadaan muwaadiniin caadiya.
MJXSG, waxay samaysay hayada samafal ah oo la yidhaahdo SAAD, waxayna guntiga u xidheen masuuliyiintii ururku iyaga oo ixtiraam mudan in ay kala qayb galaan dawlada dhinaca horumarinta.
Mudadii sanadka ahyd ee haydda ay jirtay Hayyada SAAD, waxay qabtay arimo muhiim ah, oo runtiina waxtar u leh dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia.
Dhinaca kale, sida aan saxaafada maalmahan ku aragno, garabkii nabada qaatay ee Jwxo, oo aan runtii kolkii ugu horaysayba qancin dadweynaha degaanka Somalida, dawlada degaanka iyo dawlada dhexe midna ayaa micna la,aan is-hiifaya. Jwxo nabadeed ayaan iyadu marna qaadan mawqif cad oo ay ku meel marto ama lagu ogg yahay.
Waxaa muuqatay had iyo goorba tan iyo intii uu ururku nabada qaatay cabashooyin ku saabsan miisaan la,aanta ururnimo sida; ismaqalka, dishibiliinka iyo kala dambaynta.
Waxaa la sheegay in kolkii ugu horaysay ee ay masuuliyiinta ururta Jwxo Addis Ababa tageen in taladooda ay la wareegeen masuuliyiin hore degaanka madax uga soo noqday, oo kolkiiba isfaray in ay heleen fursad ay ku hujuumaan hogaanka dawlada degaanka Somalida. Halkaas, waxaa ka bilowday baa la yidhi in Jwxo-dii nabada u soctay ay dirba mucaarad ku noqto madaxdii degaanka iyada oo aan gaadhin wali Jijiga.
Masuuliyiinta ururku waxay joogaan Addis Ababa mudo sanad ah, wax cadayn karana ma jiro udeedada ay Addis Ababa u joogaan, waxayna degan yihiin Hoteel laga bixiyo miisaaniyada Dawlada Degaanka Somalida, oo looga fadhiyo in ay wax badan u qabato shacabka. Xubnihii ururka oo intooda badan ka tagay dibadaha waxaa hunguri ku beeray joogitaanka Addis Ababa ee masuuliyiintooda.
Nasiib darada jirta, waxaa is biirsaday baa la leeyahay masuuliyiin JWXO-dii nabada qaatay iyo masuuliyiin ka soo jeeda degaanka oo u shaqeeya dawlada dhexe, kuwaas oo haatan u guntaday bur burinta nabada iyo degaanaanta degaanka Somalida Ethiopia.
Labadan kooxood ee is biirsaday waxay gacan siinayaan oo ay abaabuleen baa la sheegay beelo iyo shakhsiyaad dibad joog ah oo cadow ku ah nabada dhacday iyo deganaanta degaanka Somalida Ethiopia.
Afarta danood ee is biirsaday waxay wataan dano kala gooni ah, waxayna kuligood lid ku yihiin dawlada degaanka iyo wanaaga ay samaynayso, wadada ugu horaysa ee ay soo marayaana waa Jwxo-dii nabada qaadatay.
Jwxo-nadbadeed waxa ay doonayso lama garanayo sheegana wayday.
Masuuliyiinta dawlada dhexe ee mucaaradka ku ah dawlada degaanka waxay rabaan oo kaliya kursiga madaxweynenimo “harag sagaaro iiga kac mooyee iiga durug ma leh.”
Beelaha dacwoonayaa ujeedadoodu waa dhayday dhamayeen 20 sano, ayaa lala qaybsaday waxaana dhibay nabada ka af qabatay dhaydii ay dhamayeen. Waxayna wadaan ujeedo ah in ay colaad dhex dhigaan Ethiopia iyo shacabka nabada qaatay.
Cay ku ciil bax, Internet waxaa ku jira wax walba oo xun ruuxii doonaana wuu ka heli xumaanta uu rabo qor ama akhriso adiga ayuunbaa ku indha beeli electronics.
Waxay is leeyihiin shakhsiyaadkaas iyo beelaha ay dacwooda dheheen afxumo iyo xag xagasho ayaad wanaag ku gaadhaysaan iyo argatidii Somaliya dishay ee ahayd “ku qabso ku qadi mayside,” dalku waa Ethiopia dawladuna waa Ethiopia.
Shacabka Somalida Ethiopia ayaa nabad qaatay wayna hirgashay xubnaha ururka Jwxo, way hirgasheen nabada la qaatay . Su,aasha isweydiinta leh waxay tahay miyey mudan yihiin xubno Jwxo ah in ay mucaarada la wadaagaan dad cadow ku ah nabada iyo deganaanta degaanka Somalida ee ay shalay wanaaga u wadeen?
Dawlada wadaaga ah ee Ethiopia ayey heshiis wada galeen ururta Jwxo, waraaqihii heshiiskuna waa diyaar, maxaa hadaba dawlada degaanka ka dhaxeeya, hadayse mucaarad noqonayaan may ta dhexe ku noqdaa?
Waxaa mudan in la sheego in garabkii nabada diiday ee Jwxo, uusan maanta jirin oo cid kasta oo mucaarad sheegata ayna jirin meel ay garabsato in ay wax hore leh bilowdo mooyee. Taasina waa jid dheer!
Ugu dambayn waxaa wax laga xishooda ah in xubno Jwxo ah ay xal moodaan in degaanka Somalida ay ka bilaabaan Jabhadnimo oo hor leh, iyaga oo leh waxaan dooranay gudoomiye cusub, Jwxo in degaanka laga tirtiro ayey sheekadu joogtay goormaa la ogolaaday in degaanka lagu dhiso Jwxo?
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa xiligan ka jirta dawlada ay dadweynuhu aad u jecel yihiin waxqabadkeeduna uusan markhaati u baahnayn.
Waxaa haatan ka jira degaanka Somalida, arimo ay muddo badan doonaysay dawlada dhexe ee Ethiopia in ay ka hirgasho degaanka Somalida, kuwaas oo ah nabad, deganaan, horumar, dawlad iyo dal jacayl. Cidii diidan ku daawan mayso!
M Y Shiil